डिजाइनमै चलखेलः भनिए जस्तो बन्ला त धरहरा ? « Janata Samachar
डिजाइनमै चलखेलः भनिए जस्तो बन्ला त धरहरा ?
प्रकाशित मिति :6March, 2019 6:54 pm
काठमाडौं । भूइँचालोपछि पुनःनिर्माण गर्न लागिएको धरहराको डिजाइन परिवर्तन गर्ने षड्यन्त्र भएको खुलासा भएको छ । जमीन मुनि ३ तला गहिराई जानुपर्ने भनिएको धरहराको डिजाइन परिवर्तन गरेर जग कमजोर पार्ने चलखेल भएको छ ।
धरहरा निर्माणको बोलपत्र निस्किनु अघिनै यसको सम्पूर्ण डिजाइन र लागत तयार पारिएको थियो । डिजाइन विशेषज्ञ इन्जिनियर बिष्णु पन्तले डिजाइन गरेको धरहराको महत्वपूर्ण पक्ष नै भार बहन क्षमता हो । माटो परीक्षण गरेर धरहराको जग सतहबाट तीन तला भित्र जानुपर्छ भन्ने इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार डिजाएन गरिएको थियो । डिजाइन अनुसार सबैभन्दा प्राविधिक जोखिम र खर्चिलो कार्य नै जग निर्माणको काम हो । डिजाइन र इष्टिमेट अनुरुप बोलपत्र आह्वान गरियो । लामो छलफल पछि बोलपत्र खोलियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चाइनिज र नेपाली ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी ‘रमन जिटेक ’लाई धरहरा निर्माणको ठेक्का दिइयो ।
चाइनिज कम्पनीले इष्टिमेटेड लागत भन्दा ३० प्रतिशत कम अर्थात ३ अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का कबोल हो । ठेक्का सम्झौता पश्चात निर्माण कम्पनीले जमीन मुनिको जग ३ तलाबाट २ तलामा झार्न पुनःनिर्माणको कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
धरहराको जग घटाइएमा भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता घट्ने तर ठेकेदार र प्राधिकरणलाई आर्थिक फाइदा हुने जानकारहरु बताउँछन् । बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य कम्पनीले जग निर्माणको काम खर्चिलो र चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै बढी रकममा टेण्डर हालेका थिए । ‘रमन जिटेक जेभी’ले भने जग निर्माणमा सबैभन्दा कम र अन्य कामका लागि बढी रकम कबोल गरेको थियो । ठेक्का हातपार्न मात्र जमीन मुनिको काममा कम रकम कबोल गरेको र काम पाएपछि बिभिन्न बहानामा जगकोे काम घटाएर अन्य कामबाट असिमीत नाफा लिने प्रपञ्च गरेको छ ।
जगको डिजाइन परिवर्तन गरेर तीन तलाबाट दुई तलामा झार्दा ठेकेदार र डिजाइन परिवर्तन गर्ने इन्जिनियरलाई फाइदा हुने देखिन्छ । तर धरहराको जग अत्यन्त कमजोर हुन्छ । चुनौतिपूर्ण जगनिर्माण गर्न बढी रकममा टेण्डर बिड गर्ने अन्य ठेकेदारमाथि अन्याय हुनजान्छ । परिवर्तित डिजाइन अनुसार धरहरा निर्माण गरिए पार्किङको क्षेत्र कम हुन्छ । नेपालीे आस्थाको धरोहर र गर्विलो इतिहास बोकेको धरहरा सदाको लागि कमजोर हुन्छ ।